Tech News – Fatuux Tech
Sidee ku dooran kartaa Computer fiican!!
Waxaan manta diiradda saari doonnaa sida aad ku ogaan karto waxey ku kala duwan yihiin computers ka iyo astaamahooda. Sidaan wada ognahay badanaa ardada ama bahda rabta iney isticmaasho computer waxey ku dhiban yihiin sideey ku kala dooran lahaayeen midka fiican ama midka ku haboon dhaqaale ahaan, baahi ahaan iyo waliba nooc ahaanta. Sidaa darteeda … Continue reading Sidee ku dooran kartaa Computer fiican!! →
Fatuux Cade	Tech News	2 Comments February 28, 2019 February 28, 2019 2 Minutes
Cloud Computing waxaa lagu qeexi karaa, xog dhaxtaal ah dadka isticmaalayana ay markasto heli karaan. Cloud Computing waa awoodaha computerka qaasatan keedinta oo internetka taalo si loo helo xog aanan lumin, loo yareeyo ku tiirsanaanta computeradda ayagoo halaabi karaan, si loo wadaago xogtaas ayadoo u baahneyn in markasta ay ak taalo qofka isticmaalayo. Cloud Computing … Continue reading Waa maxay Cloud Computing.. →
Fatuux Cade	Tech News	Leave a comment February 27, 2019 February 26, 2019 1 Minute
Waa maxay Internet of Things(IoT)!!
Internet of Things ama IoT waa qalabyo isku xiran ama muuqaal ahaan iskugu xiran ama network ahaan. Waxey xogta gu gudbiyaan Network ga dhaxdiisa, Waxeyna diri karaan ayadoo loo baahneyn bani aadam iyo bani aadam kale, ama bani aadam iyo computer. Micnaheedu ay tahay waa qalab aad u caqli badan asagana is diri kara. IoT … Continue reading Waa maxay Internet of Things(IoT)!! →
Fatuux Cade	Tech News	2 Comments February 25, 2019 February 24, 2019 1 Minute
Maxuu yahay Internetka Madow(Dark Web)!! Sidee loo isticmaalaa!!
markaan ka hadleyno internet, kaliya waxaan ka isticmaalnaa shaqadiisa 13% ama ka yar halka inta dhiman ay tahay Internet ka Modow Dark Web ama Deep Web sida loo yaqaano. Dark Web waa Meesha lagu kala gato sirta dunida waxaanna u naqaana "Suuqa madow ee internet ka". Waxaa ka mid ah daroogoyinka, jirka bani aadamka, sirar … Continue reading Maxuu yahay Internetka Madow(Dark Web)!! Sidee loo isticmaalaa!! →
Fatuux Cade	Hacking News, Tech News	2 Comments February 23, 2019 February 22, 2019 2 Minutes